रामकुमारी झाँक्रीलाई पछाडी पार्दै डिला संग्रौला शिक्षामन्त्रीमा नियुक्त आखिर कसरी पूरा हेर्नुहोस् ! - jagritikhabar.com – jagritikhabar.com
रामकुमारी झाँक्रीलाई पछाडी पार्दै डिला संग्रौला शिक्षामन्त्रीमा नियुक्त आखिर कसरी पूरा हेर्नुहोस् !
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहले आफूहरु सरकारमा नजाने बताएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबार बिहान आफूलाई सहयोग गर्ने दलहरुको बैठक बोलाएको बैठकमा नेपाल समूहबाट सहभागी भएका विजय पौडेलले बताएका हुन्। स्रोतका अनुसार
अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुको नाम छिटो दिन आग्रह गरेका थिए । ‘हामीले हामी तत्काल सरकारमा आउने सम्भावना छैन, पार्टी एकताकै लागि प्रयास गरिरहेका छौं भन्यौं,’ स्रोतले भन्यो ।बैठकमा काँग्रेसबाट प्रधानमन्त्री तथा सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र
पौडेल, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र नेता कृष्णप्रसाद सिटौला सहभागी थिए ।यस्तै माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्ष प्रचण्ड, जसपाबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई, अशोक राई, एमालेको माधव नेपाल समूहबाट पौडेल, जनमोर्चाबाट अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीलगायत सहभागी
थिए ।बैठकमा नेपाल समूह सरकारमा सहभागी नहुने भएपछि बैठकमा झन् हल्लाह बढेको र देउवा रिसले आग्यो भएको स्रोतले बतायो। स्रोतका अनुसार प्रचण्ड बैठक एकछिनको लागि बैठकवाट बाहिरिएका छन्।स्रोतका अनुसार माओबादी केन्द्रवाट कृष्णबहादुर
महरालाई उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री बनाउने छलफल भएको छ। महरा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री बन्ने पक्का भएको छत्यस्तैगरी स्रोतका अनुसार नेपाली कांग्रेसवाट स्वास्थ्यमन्त्रीमा गगन थापालाई नियुक्त गर्ने छलफल भएको छ। गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री बन्ने पक्का भएको स्रोतले बतायो।देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीको सक्रियतालाई चासोका
साथ हेरिएको छ । अमेरिका विरोधी पहिचान बनाएकाहरु गठबन्धनमा हुनु र देउवा अमेरिकासँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउँदै आएका हुनुले सुरुमै केही टकरावहरु देखिन थालेका छन् ।देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुमा एमसीसी पारितको उद्देश्य पनि निहित रहेको चर्चा चलिरहँदा केसीले दिएको चेतावनीलाई गम्भीरताका
साथ लिइएको छ । गठबन्धनको अर्को दल नेकपा माओवादी केन्द्र पनि एमसीसीको विरोधमा देखिदै आएको छ । एमसीसीको मुद्दाले गठबन्धनमा तरंग नै आउने संकेतहरु देखिन थालेको छ ।